မိန်းမယူမယ်ဆိုရင် ဘယ်နေရာကို ကြည့်ပြီး အကြိုက်ဆုံးအဖြစ် ရွေးယူမလဲ? – Amara News
မိန်းမယူမယ်ဆိုရင် ဘယ်နေရာကို ကြည့်ပြီး အကြိုက်ဆုံးအဖြစ် ရွေးယူမလဲ?
ငါ့သား…အိမ်ထောင်ဖက် ရှာနေတယ်ဆိုရင် မိန်းမတွေရဲ့ရင်သားနဲ့တင်ပါး အရွယ်အစားအတွက် မင်း စိတ်မပူနဲ့။နှလုံးသား နဲ့ဦးနှောက် အရွယ်အစားအတွက်ပဲ စိတ်ပူပါ။သူမရဲ့ချစ်မေတ္တာနဲ့ သည်းခံစိတ်အရွယ်အစားအတွက်ပဲ စိတ်ပူပါ ။
နောက် ၅ နှစ် ၁၀ နှစ် ကြာပြီးတဲ့အခါရင်သားနဲ့တင်သားတွေက ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်။အခု မင်းအမေကိုပဲ ကြည့်လေ ရင်ပြားကြီးနဲ့တင်ပြားကြီးသာ ကျန်တော့ပေမဲ့ ငါတို့တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ချစ်ကြတယ်။ငါ့သား ငွေကို ချစ်တဲ့မိန်းမတွေကို သတိထားပါ။အဲ့ဒီ မိန်းမတွေဟာ အချိန်ပြည့် သူတို့ရဲ့ ဆံပင်တွေ အဝတ်အစားတွေ ဖိနပ်တွေပိုက်ဆံအိတ်တွေ အတွင်းခံဘောင်းဘီတွေနဲ့မိတ်ကပ်တွေအကြောင်း ပြောတတ်ကြတယ်။
အဲ့ဒီ အရာတွေ မပါဘဲနဲ့လဲ ကောင်းမွန်တဲ့အိမ်ထောင်ရေးဟာ ရပ်တည်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ အချစ်မပါဘဲတော့ အိမ်ထောင်ရေး မတည်တံ့နိုင်ဘူးပေါ့။ငါ မင်း အမေကို လက်ထပ်ခဲ့တုန်းကကိုယ်ပိုင် အိမ် ကိုယ်ပိုင် ကား မပိုင်ခဲ့ဘူး။ငါဟာ ပညာတတ်တစ်ယောက်တောင် မဟုတ်ခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ ငါ့မှာ အိပ်မက်တွေ ရှိခဲ့တယ်။မင်း အမေက ငါနဲ့ ငါ့ရဲ့ အိပ်မက်တွေကိုနှစ်သက်လေးစားပြီး ကူညီထောက်ပံ့တယ်။မင်းရဲ့ အိပ်မက်တွေကို လျစ်လျူ ရှု တတ်တဲ့ မိန်းမ အကြောင်းတစ်မိနစ်လောက်တောင် တန်ဖိုးထား စဉ်းစားမနေပါနဲ့။
မင်းထက်ပိုပြီး မင်း အိပ်မက်တွေကို ကောင်းကောင်းတွေ့မြင်နိုင်မယ့် မိန်းမတစ်ယောက်ကိုမင်း ရှာတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ မင်း ကံကောင်းပြီပေါ့ ငါ့ သား။
မိန်းမ ဆိုတဲ့အမျိုးက မြေအိုးလိုပဲ ငါ့သားအဖေတို့လို“ရေ”…ဆိုတဲ့ ယောင်္ကျားသာ မရှိရင် မှောက်ထားရုံသက်သက်အိုးအပြင်နှုတ်ခမ်းမှာပိုးမျှင်တန်းပြီး ရှက်နေရုံပဲလေ။သူတို့ကို လက်ထပ်ရတာဆက်စပ်သမျှ အကြောင်းအကျိုး အကောင်းအဆိုး ဒွန်တွဲရိုးရိုးလေး တွေးမယ်ဆိုအိုးရွေးဝယ်ရသလိုပဲပေါ့ကွယ် ။
အနယ်မနာ မီးမကျက် ကွဲအက်လွယ်တဲ့အမျိုးကိုစပ်စလူးအိုးလို့ ခေါ်သကွဲ့ဘယ်တော့မှ မဝယ်နဲ့နော် ။မီးပေးနာထားလို့ ဧည့်သည်လာတိုင်း အရှက်ခွဲမျက်နှာမည်းတဲ့အိုးမျိုးလျှော့ဈေးနဲ့ရောင်းတောင်မျက်စောင်းမထိုးမိစေနဲ့ကွဲ့။ရေဘယ်လောက် ဖျန်း ဖျန်းမကျေမချမ်းနဲ့ အမြဲတမ်း ဆူဆူပူပူနှုတ်ခမ်းထူတဲ့အိုး များ ဘယ်သူက အလကားပေးပေးယူဖို့မတွေးလေနဲ့ သားရေ ။
အဖိုးနည်းရင် အိုးကွဲပဲ ရမတဲ့ အိုးရွေးမှန်မှလည်းအကျိုးပေးသန်မှာပဲ မဟုတ်လား။အိုးကြီး အိုးသေးတစ်မျိုးပြီး တစ်မျိုးရွေး ကြေးတိုးပေးဖို့အိုးဈေးတန်းကတော့ သွေးတိုးစမ်းနေဦးမှာပဲ…သားရေ။အက်ကြောင်းတလျှောက်မိတ်ကပ်နဲ့ဖျောက်ထားတဲ့ပေါက်ပြီးသား အိုးတွေ။မလှိမ့်တစ်ပတ်နဲ့ စိမ့်တတ်တဲ့ အိုးတွေ။လည်သိမ် အောက်ကားဆောင့်ကြွားကြွား အိုးတွေ။ကနုတ်များများရေးအရုပ်အသားပေး အိုးတွေ။
ကန့်သတ်ချက် မရှိဘူး နှံ့စပ်အောင် လျှောက်ကြည့်ပတ်ပတ်လည် မြှောက်ကြည့် လက်နဲ့ ခေါက်ကြည့်“ဒေါက်”…လို့ အသံထွက်ရင် ပေါက်ထွက်မယ့်အိုး လို့မှတ်“ဒပ်”…လို့ ထွက်တဲ့အသံ လက်မခံပါလေနဲ့အက်သံပါနေသတဲ့ကွယ်နားထဲမှာ ကြည်လင်“ဒေါင်”…လို့ မြည်ရင်တော့ပီပြင်တဲ့အိုး ရပဟေ့ အဖိုးအခ ဈေးများလည်း အပြေးအလွှားဝယ် တလေးတစားသာ သယ်ခဲ့တော့။အဲဒါ တို့ဘိုးဘေးတွေ လက်ထက်ကတည်းက အိုးရွေးတဲ့အချက်ပဲ…ငါ့သား ။ဈေးဝယ်ဆိုမှတော့ဈေးလယ်ထိတော့ ရောက်အောင်သွားတန်းထားတဲ့အိုးတွေ ရှိတယ် လမ်းသလားတဲ့အိုးတွေ ရှိတယ်
အနေသန့်တဲ့ အိုးအကောင်းတွေရှိတယ်မြေညံ့တဲ့ အိုးအဟောင်းတွေရှိတယ်အဖိုးသားနား အနည်းအများအမျိုးအစားလည်း ကွဲပြားတယ်အိုးမမှားဖို့……ကြိုးစားဖို့ကအမျိုးသားတိုင်း သဘောပေါက် ဟာတစ်ယောက်…ဟောတစ်ယောက်နဲ့ အချိုးပြေ မပြေသိရအောင် အိုးတွေသာ လိုက်ခေါက်ကြည့်ပေတော့…သားရေ။
Previous Article ဗွိတိနျနိုငျငံက Pfizer ကိုဗဈကာကှယျဆေးကို တရားဝငျ ထိုးနှံခှငျ့ပွုလိုကျပွီ
Next Article လေဖြတ်လူနာများသို့ ဆရာတော် တစ်ပါးပေးတဲ့ ဆေးနည်းလေးပါ